Nitarina madio PTFE Adhesive Thread Tape - China Yangzhong Luck Star kase
Nitarina Pure PTFE Adhesive Thread Tape
Tombo-kase Dehumidifier Desiccant Fanodina
Diaphragm herinaratra dosing paompy Seal
PTFE valopy CNAF Lapjoint Flange Gasket
Mitondra Bushing Taper Lock
Camshaft Ny Components
OEM manjarano feno PTFE Ring
No-lavaka PTFE valopy CNAF Gasket
Description: 1.Expanded PTFE mpiara sealant kasety dia multi-tanjona gasket kasety vokarina amin'ny 100% nivelatra PTFE fluorocarbon fitaovana. 2.It namatsy ho toy ny ambany mitohy hakitroky kasety amin'ny tena adhesive manohana esory. 3.It dia malefaka sy spongy, mamela azy hanaraka mora foana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra etỳ ambonin'ny sy hamintinana ny kofehy manify eo ambany fanerena. Fampiharana: Nitarina PTFE mpiara sealant kasety dia kevitra ho toy ny gasket kasety amin'ny vy, fitaratra-nilahatra, PVC sy ny sodina fiberglass flanges, fume ...
1.Expanded PTFE mpiara sealant kasety dia multi-tanjona gasket kasety vokarina amin'ny 100% nivelatra PTFE fluorocarbon fitaovana.
2.It namatsy ho toy ny ambany mitohy hakitroky kasety amin'ny tena adhesive manohana esory.
3.It dia malefaka sy spongy, mamela azy hanaraka mora foana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra etỳ ambonin'ny sy hamintinana ny kofehy manify eo ambany fanerena.
Nitarina PTFE mpiara sealant kasety dia soso-kevitra ho toy ny gasket kasety amin'ny vy, fitaratra-nilahatra, PVC sy fiberglass sodina flanges, fume ducts, simenitra lids, hafanana exchangers, fibre fitaratra nanamafy plastika fanaka, paompy trano flanges, etona sambo flanges, manhole sy manhole manarona, tanimanga tonona, rivotra ducts, sy pneumatic hydraulic rafitra, rafitra famatsian-drano sy ny turbine tranga.
Nitarina PTFE mpiara kasety dia vokarina amin'ny 100% PTFE izany, dia ho inert zavatra izay dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro manohitra manimba tsikelikely tontolo iainana, afa-tsy anidina alkali metaly sy ny elemental fluor. 24b tsy handoto haino aman-jery, ary azo ampiasaina amin'ny fitaovana Sakafo sy ny Fanafody fampiharana.
Product Type: nitarina PTFE
Supply Type: Joint Sealant Tape
Ara-nofo: 100% PTFE, malefaka sy tsara fihenjanan'ny resaoro
Hateviny: 1mm ~ 7.0mm
Ambainy: 3mm ~ 25m
pH isan-karazany: 0-14
Pressure Aza dia: 20Mpa (na 2900 PSI, na 200kgf / cm2)
Hakitroky: 0,7 ~ 0.8g. / Cm3 (43 ~ 49.5lbs. / Cu. Ft.3)
Matrix Tensile Hery: 30Mpa (4260 PSI)
Mikisaka fialam-boly (ASTM F38): 51%
Previous: Tombo-kase Dehumidifier Desiccant Fanodina
Colorful Ptfe kase Tape
Ptfe Sodina kase Tape
Ptfe kase Tape
Thread kase Ptfe Tape
OEM Carbon feno PTFE Tombo-kase
Laboratory PTFE barika
Tombo-kase OEM pijery Ring
OEM Colorful Silicone O-Ring
Self maharitra Lubrication Split Cut pijery Piston ...